Home Wararka Qoor-Qoor iyo Odowaa oo u isticmaalaya dagaalka Ahlusunna diyaaradaha Darone Turkiga
Waxaa shalay lagu arkayay magalaada Guriceel diyaarada “Drones” ee aan cidna wadin oo ku dul heehaabaya magaalada Guriceel , gaar ahaan aagaga ay degan yihiin dagaalyahanada Ururka Al Sunna Wajameeca.
Diyaaradahaan oo xili galab gaabkii dib ugu soo noqnoqday magaalada Guriceel ayaa ah nooca uu dalka Turkiga ugu deeqay dalka Soomalaiya. Waxaa maalintik saxaaad ku sugan magalaada Dhuusamareeb Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka Janaraal Odowaa.
Waxaa xaqiiqdii nasiib daro ah in qalabkii loo keenay in lagula dagaalo ururka Al Shabaab maanta la doonaya in lagu dilo dad shacab ah. Ururka Al Shabaab ayaa horay u qabsaday qalabkii Turkiga ugu deeqay dalka Soomaaliya. Dhanka kale Dowlada Turkiga ayaa dhankooda sii luminaya kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed ku qabeen dowladooda.